Muraayadaha looxa barafka | Dooro waxa ugu fiican kaliya 3 talaabo - ULLER
Hadda oo xilligii barafka la imanayo, waxaa la joogaa waqtigii laga fikiri lahaa kan ugu fiicnaan lahaa Xaraashka barafka in aan ka heli karno suuqa.
Waxaan jecel nahay barafka! Ma jiraan wax la mid ah hoos u dhigidda jidka looxyadaada ku yaal, adigoo u oggolaanaya farsamooyinkaaga ugu fiican iyo dhaqdhaqaaqyadaadu inay ku dul socdaan barafka. Xaaladda aadan ogeyn, waxay dhahaan miiska koowaad ee snowboard Waxaa alifay qiyaastii 1965 Sherman Poppen, oo ah injineer ka socda Muskegon, Michigan (USA) oo maalin uun go'aansaday inuu xiro laba skis oo uu siiyo gabdhahiisa si ay ugu ciyaaraan barafka Laga soo bilaabo xilligaas, waxaa la soo saaray oo caan ku ahaa sanadihii la soo dhaafay iyada oo ah cayaar aad u daran, iyada oo kor u qaadaysa kobaca sii kordheysa ee ciyaartoyda. Si kastaba ha noqotee, ma ahayn illaa 2015 in lagu daro Ciyaaraha Olombikada oo ay heshay aqoonsiga caalamiga ah ee ay maanta haysato.
Maanta, malaayiin dad ah oo adduunka ah ayaa ku dhaqma snowboard xirfad ahaan ka dibna malaayiin kale ayaa heegan u ah booqashada dhibco ku habboon tartamada qaranka iyo kuwa caalamiga ah ama si fudud ugu biiraya casharrada iyo tallaabooyinka ugu horreeya ee snowboard.
Laakiin waxaa jira hal shay oo ka mid ah raggaan geesiyaasha ah (xirfadleyda ama ku-cusub) oo ay wadaagaan: waxay had iyo jeer qaadaan guddigooda, qalabkooda iyo Xaraashka barafka. Aad ayey muhiim u tahay inay adeegsadaan loox ku habboon oo leh kabaha ku habboon, dharka kuleylka, galoofyada, maaskaro ama Muraayadaha barafka ilaaliya oo u hamuun qaba in uu ku dhiirado ficil
Waxay u muuqan kartaa wax dhib badan, laakiin runtii waa mid aad u fudud! Markaan doorano annaga Xaraashka barafka Waxaa jira seddex daqiiqadood oo muhiim ah oo kaa caawin doona inaad xulato kuwa ugu fiican, oo halkan ayaan kuu sharraxnay adiga.
Haddii aad galayso adduunka barafka barafka, ama aad si fudud u rabto inaad ku beddesho muraayadahaagii hore kuwo ka wanaagsan, waxaan haysannaa qaaciddada ugu fiican ee aad ku dooran karto si wanaagsan marka xigta ee aad iibsanayso Xaraashka barafka. Dooro kuwaaga 3 tallaabo!
FURAHA XULASHADA KOOXAHA UGU FIICAN SHARBIYADA SNOW
1. ILAALINTA Qorraxda
Tani wax qarsoodi ah uma ahan qofna: ilaalinta indhaha waa mid aad muhiim u ah markay tahay Xaraashka barafka. Waa mid ka mid ah sababaha lama huraanka ah ee aad markasta u sido kanaga muraayadaha barafka. Iyo, marka lagu daro, waa mid ka mid ah faahfaahinta ugu muhiimsan ee ay tahay inaad eegto markii aad iibsaneysid, taasi waa, haddii ay si dhab ah u leedahay 99% ama 100% ka hortagga qorraxda si ay runtii kuu difaacdo.
Had iyo jeer hubi inay iyagu leeyihiin ilaalinta UV- 400! Tan macnaheedu waa adiga Xaraashka barafka Waxay kaa xayiri doonaan wixii shucaac ah ee loo yaqaan 'ultraviolet rays' oo leh hirarka ka yar 400 oo nanomitir, miirahooda ayaa kaa ilaalin doona shucaaca UVA iyo UVB.
Intaa waxaa dheer, iftiinka xad dhaafka ah ee aagga barafka waa mid aad u weyn, gaar ahaan xilliga qaboobaha maxaa yeelay booska qorraxda ee cirka ayaa ka hooseeya. Raajooyinka ayaa lagu saadaalinayaa inay u janjeedhaan indhaha waxyeellada xaaladahaas awgood waana wax aad looga xumaado haddii aynaan xirnayn maaskarada ama Xaraashka barafka ku filan.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in barafka ku jira xaaladahaas uu ka turjumayo iftiinka si cilmiyaysan u hadlaya. Tani waa sababta oo ah midabka cad ma nuugo iftiinka, laakiin wuu iska celiyaa. Sidan oo kale, inaad la xiriirto barafka macnaheedu waa inaad ka dareemaysid iftiinka dhinacyo badan iyo dhinacyo kala duwan, sidaa darteed waa inaan sifiican iskaga ilaalino sidii hore Muraayadaha barafka ama maaskaro baraf tayo leh.
Waxa kale oo muhiim ah in laga fiirsado taada Xaraashka barafka u hogaansanaadaan heerarka ISO si ay kuu ilaaliyaan si sax ah waxaana oggolaaday CE iyagoo u hoggaansamaya heerarka amniga Yurub.
ka Muraayadaha barafka Kaliya maahan inay indhahaaga ka ilaaliyaan shucaaca qorraxda, waxay sidoo kale kaa caawin doonaan waxqabadkaaga markaad dhex socoto barafka, maadaama ay si weyn kor ugu qaadi doonaan muuqaalkaaga ficil ahaan. Aad bay muhiim u tahay inaad doorato labada ugu fiican muraayadaha barafka,qiimo aad u fiican oo lacag ah, had iyo jeer fiiro gaar ah u yeelo muraayadaha indhaha ee uu xidho, laga bilaabo naqshadeynta iyo midabka illaa heer.
- SIDA LOO SAMEEYO MIDABKA -
Muraayadaha barafka waxaa jira waxyaabo badan, laakiin in yar ayaa ah kuwa kaa caawinaya inaad horumarka ka gaarto isboortiga. Xaqiiqdii waxaad kaheli doontaa ikhtiyaarro badan oo midabbo leh waxaadna isweydiineysaa kuwee ayaan doortaa? Ma ka duwanaan doonaan? Runtu waxay tahay inay runti ka duwan yihiin oo ay leeyihiin astaamo u gaar ah si aad si fiican ugu muuqato markii aad is rogrogayso. Wax yar ka baro midabada ku habboon adiga Xaraashka barafka!
Muraayadaha barafka barafka leh
Waxaa lagula taliyaa marka iftiinka iftiinka hooseeyo; haddii aad baraf baraf gasho xilliyada gabbaldhaca ama waaberiga, iyo sidoo kale haddii ceeryaamo ka jirto deegaanka ama maalintu waa daruuro ama qeyb daruuro ah.
Xaraashka barafka lagu qurxiyo
Waa midabka raaca jaallaha, sidaas darteed sidoo kale waxaa loo muujiyaa maalmo qayb daruuro leh iftiin yar. Si kastaba ha noqotee, midabkan muraayadaha indhaha ayaa ka caawinaya wax badan si loo kordhiyo heerka midab-kala-sooca midabka ee indhahaagu ay dareemaan.
Xaraashka barafka barafka leh
ka Muraayadaha barafka Midabada cas waxay si weyn u yareeyaan daalka indhaha waxayna ku siinayaan qoto dheer oo dhul ah, marka lagu daro kordhinta kala duwanaanta midabada. Midabkan muraayada ah ee aad dooratay ayaa si gaar ah loogu talinayaa muraayadaha indhaha iyo waji-xidhka ee jawiga barafka, iyo sidoo kale isboortiga ka baxsan wadada.
Xaraashka barafka buluugga ah
ka Muraayadaha barafka Muraayadaha muraayadaha buluuga ah waxaa lagula talinayaa maalmaha qorraxda, laakiin sidoo kale waad u isticmaali kartaa maalmaha daruuraha qayb ahaan. The Xaraashka barafka leh muraayadaha indhaha buluuga ah waxay ku bixiyaan aragti “qabow” panorama, tanna waxay ka caawiyaan ka hortagga iftiinka diiran ama jaallaha ah ee qorraxda ka baxa, waxayna yareeyaan daalka indhaha ee ku yimaada natiijada.
Muraayado baraf leh oo buluug ah (guduud ama guduud)
ka Muraayadaha barafka muraayadaha indhaha oo guduud ah ayay fuliyaan ujeeddada ah in lagu yareeyo iftiinka xad dhaafka ah ee ka imanaya iftiinka iftiinka deegaanka, iyagoo kaa caawinaya inaad si fiican u aragto astaamaha walxaha iyo dadka kugu xeeran. Iibsiga Muraayadaha barafkaoo leh muraayadaha indhaha ee buluuga ah waxaad sidoo kale hagaajineysaa aragtidaada qoto dheer ee beerta, iyo sidoo kale aragtidaada midabada dhabta ah ee dabiiciga ah.
Muraayadaha muraayadaha cawlku waxay yareeyaan xaddiga ugu badan ee iftiinka suurtagalka ah, sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo maalmaha qoraxdu jirto iyo saacadaha ugu sarreeya inta lagu jiro maalinta. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaa caawinayaan inaad si wanaagsan u aqoonsato midabada dhabta ah ee deegaanka kugu xeeran.
Muraayado baraf cagaaran
Waxaa si gaar ah lagula talinayaa markaad baraneyso isboortiga jiilaalka oo ku lug leh xawaare badan iyo dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqooda. Waxay ka caawiyaan isha markay diiradda saaraan walxaha hareeraha ka jira waxayna ka caawiyaan inay kala soocaan soohdimahooda iyo waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin. Qaabkan Muraayadaha barafka waxay yareysaa aragga maalmaha daruuraha oo aad u darran, waxayna caawisaa isku dheelitirka iftiinka maalmaha qorraxda.
-SIDA LAGA SOO XIGTAY Qeybaha CRYSTALS-
Ugu fiican Xaraashka barafka Iyagaa kaa difaaci doona maalmaha qorraxda iyo daruuraha labadaba, laakiin waa haddii aad isticmaasho nooca saxda ah ee muraayadaha indhaha. Miyaad hore u taqaanay iyaga? Muraayadaha tayada leh waxay la yimaadaan tilmaam qayb ahaan ah, oo u dhexeeya CAT0 illaa CAT4, haddii ay shaandheeyaan ama u oggolaadaan marinka iftiinka ee dhex maraya heer ka weyn ama ka yar. Xaaladdan oo kale, qaybta 0 ayaa noqon doonta tan ugu fudud, 4-na waxay noqon doontaa tan ugu madow.
Ficil ahaan hufan. Waxay noqon karaan bilaa midab ama waxay leeyihiin midab aad u fudud oo siman. Miiraheeda gudbinta iftiinka waxay ka miiraysaa 80% ilaa 100%.
Midab khafiif ah oo habboon in la adeegsado markii iftiinkiisu yaraado, daqiiqado ay qorraxdu u dhacayso fiidka, aroorta hore, iyo maalmo daruuro leh. Nalalkiisa gudbinta iftiinka wuxuu ka yimaadaa 43% ilaa 80%.
Iyagu waa kiristaalo madoow oo dhexdhexaad ah. Nalalkeeda gudbinta iftiinka 18% ilaa 43%, waxaa lagu muujiyey kiisaska iftiinka dhexe.
Waxay leedahay midab mugdi ah oo ku filan in lagu dareemo raaxo qorraxda, iyo sidoo kale waqtiyada ugu sarreeya. Miiraheeda gudbinta iftiinka ee laga soo qaado 8% ilaa 18%. Waxay ku siinayaan heerka mugdiga ah ee ku habboon ciyaaraha dibadda, marka iftiinka iftiinka uu dhexdhexaad yahay oo aad u daran yahay.
Noocyada kirismaska ​​waa runti mugdi. Xaqiiqdii, looma ogola in loo isticmaalo wadista wadista. Waxaa loo isticmaalaa duruufo dhalaalaya halkaasoo Noocyada 3aad ee muraayadaha aysan ku filnayn. Nalalkiisa gudbinta iftiinka wuxuu ka yimaadaa 3% ilaa 8%, isagoo ah kan ugu madoow ee heerarka oo dhan.
Nooca 1 iyo Nooca 3 ayaa ah kuwa ugu habboon in la isticmaalo marka barafka lagu duubo iyada oo kuxiran duruufaha cimilada ee aad naftaada ku hesho.
WAY KA FIICAN YAHAY HADDII AY YOOXAN YIHIIN Muraayadaha SNOWBOARD LAGU SOO SAARO LAYNIJOOYINKA MAGNETKA LA ISAGA BADALO!
Waxa ugu badan ee lagula taliyay inaad doorato Xaraashka barafkaleh muraayadaha bir-isku-beddelashada oo la beddeli karo oo kuu oggolaanaya inaad doorato xilligan qaybta lens-ka ee kugu habboon. Xaaladaha cimiladu way is beddali karaan daqiiqad ilaa kan ku xigga, iyo haddii kale Xaraashka barafka waxay leedahay faa'iidadan, maxaa yeelay waxaad ku beddelaysaa dhowr ilbidhiqsiyo oo aad u isticmaashaa midka saxda ah.
Ciyaaraha barafka sida barafka ama snowboard waa ciyaaro xad-dhaaf ah oo isboorti oo u baahan in si dhab ah loo qaato. Tani waxay u baahan tahay qalab sax ah, iyo u diyaar garaw jireed iyo maskaxeed si loo damaanad qaado daqiiqadaha ugu fiican ee madadaalo iyo adrenalin.
3. MAADDUUNKA IYO QALABKA
Had iyo jeer maskaxda ku hay in maadada aad u doorato taada Xaraashka barafka iyo ku habboonaanta wajigaaga ayaa kuu damaanad qaadi doonta inay si sax ah u gutaan shaqadooda difaac, ma ahan oo keliya qorraxda laakiin sidoo kale banaanka guud ahaan.
Talooyin ku saabsan xulashada guluubyada barafka ugu fiican:
Xullo muraayado baraf ah oo wajigaaga si sax ah ugu habboon. Waa inay haystaan ​​cajalado ka hortagga sibiibix ah si ay si fiican ugu hagaajiyaan wejigaaga iyo koofiyaddaada. Intaas waxaa sii dheer, waxaa muhiim ah inay wejigaaga si sax ah ugu habboon yihiin, oo ay ku jiraan meelaha dhinacyada, si ay si buuxda u daboolaan aragtidaada durugsan.
Muraayadaha miisaanka barafka fudud. Fiiri waxa ay yihiin waxyaabaha Muraayadaha barafka. Xulo tusaale ahaan "polyurethane thermoplastic", kaas oo ah kan ugu badan ee la muujiyay, waxayna kaa caawin doonaan inaad keento tayada ugu sarreysa iyo fudayd.
Iyada oo nidaamka “Anti-fog” ama "Antifog". Hadaad Muraayadaha barafka Waxay leeyihiin nidaamkan kaa caawin doona inaad ka fogaato qulqulka adiga oo barafka daadanaya.
Muraayadaha looxa barafka oo leh hawo hawo gudaha ah. Waxa ugu fiican ayaa ah inay leeyihiin tikniyoolajiyadda ka hortagga uumiga. Tani waxay u oggolaaneysaa hawadu inay dib u wareejiso si ay si fiican u muuqato.
Hada hubaal waxaad dareemeysaa raaxo badan oo aad u diyaar garowday inaad ku raaxeysato xiisaha snowboard inta lagu jiro xilligan. 3daas talaabo adoo maskaxda ku haya waxaad dooran kartaa Xaraashka barafka ku habboon in la dareemo adrenaline-ka isboortiga. Xor ayaad u tahay inaad doorato waxa ugu fiican oo aad bedesho aragtidaada marka aad ku dhaqmayso snowboard! Raac talaabooyinkan oo khabiir ku noqo Muraayadaha barafka.
Freeride waa nooca loox barafka ah ee aad gebi ahaanba ka soo degto fanka, barafka bikradaha ah, oo leh muraayado baraf wanaagsan, kana fogaanaya dhagxaanta iyo caqabadaha ka soo baxa oo dhan